Leica Geosystems dia manolotra fonosana fitiliana laser 3D vaovao - Geofumadas
Aogositra, 2020 Engineering, fanavaozana
Ny fonosana vaovao dia misy ny scanner laser mpoto Leica BLK360, rindrambaiko desktop Leica Cyclone REGISTER 360 (Edition BLK) sy ny Leica Rivo-doza FIELD 360 ho an'ny takelaka sy telefaona. Afaka manomboka amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny seamless sy workflows avy amin'ny Leica Geosystems zava-misy amin'ny fividianana ny vokatra ho an'ny loomo Autodesk sy ny vahaolana famoronana Autodesk. Miaraka amin'ity fonosana ity, ny Leica Geosystems dia hanolotra famokarana rahona point, raha ny teknolojia Autodesk kosa handany ny angon-drakitra.
"Nandehandeha niaraka tamin'i Autodesk izahay mba hanaparitahana ny tontolon'ny fisamborana ny zava-misy amin'ny alàlan'ny fampielezana lozisialy rindrambaiko sy sensor" ...."Ity fonosana vaovao ity dia manome kojakoja fihinanana milamina sy fanatsarana ny fantsom-pifandraisana ho an'ny mpanjifantsika amin'ny fifandraisana mivantana amin'ny ekolojia Autodesk." Faheem Khan, filoha lefitry ny fanadihadiana amin'ny Leica Geosystems.
Ny rindranasa mikoriana vaovao dia manohana ny fanaraha-maso ny scan, ny fisoratana anarana alohan'ny fisoratana anarana ary ny fanaovana geotagging eny an-tsaha. Tafiditra ao anatin'izany ny fahazoan-dàlana maimaim-poana, ny fisoratana anarana ary ny fitrandrahana kalitao mifangaro amin'ny alàlan'ny vahaolana amin'ny fahazoan-dàlana Leica Geosystems hafa, toy ny Leica CloudWorx plug-in ho an'ny vokatra Autodesk.
“Nandritra ny taona maro, ny Leica Geosystems sy i Autodesk dia nizara vina iraisana mba homenamanome ny traikefa data akaiky indrindra tonga lafatra ny matihanina amin'ny indostria, izay hanohizantsika hatrany, ” hoy i Bryan Otey, talen'ny Autodesk Reality Solutions. "Ny tontolon'ny teknolojia Autodesk dia manome ny tarika tetikasa ny fahaizana mampiasa ny fampahalalana mahomby kokoa amin'ny famoronana ka hatramin'ny fananganana. Avy amin'ny fisie rakitra ka hatramin'ny fanjifana, fifandraisana lehibe ho an'ny mpanjifanay izany. "
Izahay dia mitory ny fivoaran'ny teknolojia, amin'ny alàlan'ireo goavan'ny teknolojia ireo, manohy hatrany ny fandrosoana ho avy isika.
Previous Post«Previous Fijery geospatial sy SuperMap
Next Post Twingeo dia namoaka ny andiany faha-4manaraka »